China ALUMINUM Complex PANEL ifektri kanye nabaphakeli | I-Alucosun
I-ALUMINUM COMPOSITE PANEL (Yodonga olungaphambili lwesakhiwo)
Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe obuyisisekelo, i-Alucosun FR yenzelwe izidingo eziqinile zemithetho yokulibaziseka komlilo kwimikhiqizo yezokwakha. I-Alucosun FR iceliwe ngabakhi bamabhilidi omhlaba wonke nabanikazi bezakhiwo hhayi kuphela ngezakhiwo zayo ezinhle njengokuqina ngokweqile, ukuqina okuphezulu kepha amandla amahle kakhulu, kepha futhi, okubaluleke kakhulu, ukusebenza kwayo okuhlaba umxhwele ekuqinisekiseni ukuzuza okuhle okuvela kumaminerali ayo umnyombo.
I-Varitey yemibala enombala omkhulu wemibala ejwayelekile neyesiko, kanye ne-mat kanye ne-gloss high nishes. mirror futhi brushed nished futhi Futhi i-Alucosun ingumkhiqizi wokuqala onikela ngamaphaneli abanzi (2000mm) asekela ukuphrinta okubanzi.
LULA PEEL FILM
Ifilimu Ehlukile Yokuzivikela Yesikhumba Esingasuswa kalula noma nini lapho usebenzisa. Iphaneli yendawo ngeke ibambe noma ikuphi lapho kumiswa inqubo yokususa. I-viscosity yeFilimu ayiphambuki ngokuhamba kwesikhathi imiphumela ikhuphula ishalofu-impilo ye-Alucosun Sign ®.
UHLELO LWEQA OLUTHEMBEKILE
Uhlelo olusungulwe kahle nolubhalwe phansi lwe-QA luqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo esiwuhambisayo. Kuzuzwe ngokuhlanganisa ngokuphelele iLaboratory ephelele nabasebenzi abanamakhono. Yonke inqwaba yokukhiqiza ihlolwa ngezikhathi ezijwayelekile zamasampula wesikhathi futhi imibiko igcinwa irekhodwe esitokisini esiphephile sokulandelela okuzayo.
Sisebenza ubusuku nemini sinesitokisi esanele se-Raw Materials sokucaciswa okuhlukahlukene ukukhonza amakhasimende ethu emhlabeni jikelele. Ngokwengeziwe, sibekwe ngamasu okusondela emithonjeni esenza sikwazi ukwenza imikhiqizo yangokwezifiso futhi, senza isikhathi sethu sokuhola sibe sifushane kunabanye abakhiqizi abaningi.
Sibe negalelo elibonakalayo embonini yezimpawu ngokusungula umkhiqizo omusha. Isigaba sethu se-R & D sibambisene nendawo yokukhiqiza yendawo ye-PPG ukuthuthukisa upende okhethekile we-PE ongahambelana nazo zonke izinhlobo zemishini ye-Digital Printing. Okwamanje, sisebenza kanzima ekwakheni umkhiqizo omusha okhanya kakhulu futhi uphephile kumakhasimende ethu.
Uphawu lwe-Alucosun®iphaneli ehlanganisiwe ye-aluminium yakhiwa ngamashidi amabili e-aluminium kanye nomgogodla we-polyethylene ahlonywe ngenqubo eqhubekayo enokushisa okuphezulu.
Into Ibanga Usayizi Ojwayelekile
Iphaneli wugqinsi (mm) 2-8mm 2mm, 3mm, 4mm, 6mm
Ubukhulu be-Aluminium Skin (mm) 0.1-0.5mm 0.12mm, 0.15mm, 0.21mm, 0.3mm
Okuvundlile (mm) ± 5
Ubuningi be-Bow (mm) ≤5
Ubukhulu besikwele (mm) ≤5
Ubukhulu Bopende (micron) 18-20µm
Ipensela Ukuqina 2H
Ukuqina Kwokumboza 2T
Lokushisa Ukumelana -40 ℃ ~ + 80 ℃
Impact Amandla (Kg / cm2) 50kg / cm2
Ukumelana Namanzi Abilayo 2hrs, alukho ushintsho
Ukumelana Ne-asidi 5% HCL, 24hrs alukho ushintsho
Alkali Ukumelana 5% NaOH, 24hrs alukho ushintsho
Ukumelana Namafutha 20 # uwoyela wenjini, alukho ushintsho
Ukumelana ne-Solvent Izikhathi ezingama-200 nguMEK
Ukumelana Nokuhlanza Izikhathi eziyi-1000 ngaphandle koshintsho
Amandla Peel 180 ° ＞ 5 INewton / mm
Ingxubevange Uhlobo AA3003 / AA1100
Uhlelo Lopende / Indlela / Ukucaciswa I-Polyester / Coating Coating / i-AAMA
Isicwebezelisi @ 60 ° 70% -100%
Isiqu seMatte 20% -40%
Ukulahleka Kokudlulisa Komsindo (dB) 23-25
Inani (R / MK) 0.0045.0078 0.0110
I-Value (W / MK) 5.7 5.6 5.5
Ukunwetshwa Kwe-Liner Thermal 2.4 mm / m @ njalo ngo-100 ° C
Uphawu lwe-Alucosun ®amaphaneli asetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene abantu abahlangana nazo empilweni yansuku zonke. Kungumkhiqizo owusizo futhi osebenza ngezindlela eziningi embonini yezimpawu nezokukhangisa yendalo enhle kakhulu.
UKWENZA IZIMPAWU NOKUTHENGA ISITOLO
Ngenxa yokuguquguquka nokuvelela okuvelele kwe-Alucosun Sign ®PE, izifanela kahle kakhulu ekwakhiweni kwezimpawu, izibonisi, izitendi zombukiso, njll.
Uphawu lwe-Alucosun® I-PE, i-PPG eqinisekisiwe ngopende, enezinketho ezahlukahlukene zombala nezicwebezelisi, inika isisombululo esifanele sokuhlobisa kwangaphakathi.
Ukuphrinta kwe-LED / UV DIGITAL
Uphawu lwe-Alucosun ®inikeza kokubili ukuphrinta kwe-UV digital nokuphrinta kwe-LED. Iyakwazi ukuhambisana nazo zonke izinhlobo zemishini yokuphrinta, indawo esephaneli futhi ekwazi ukuphrinta kwe-digital digital. Impela, ubuchwepheshe bokuphrinta be-LED bungonga amandla angama-50%. Izindleko zokukhanya kwe-LED zingasetshenziswa amahora angama-4000, futhi zinobungani bemvelo, zizinzile, zisebenza kalula. Kufanele kube mkhuba wemboni yokuphrinta.
Yonke i-Alucosun Sign® ukuqeda kuza ngeminyaka emi-5 iwaranti yokusetshenziswa kwangaphandle.Amabhulashi aqedile kanye nesibuko ngenqubo ehlukile awaqinisekisiwe ngokufaka isicelo sangaphandle kwesiqinisekiso sombala ngqo ukusithinta ngemininingwane.
Kusukela ekuqaleni, i-Alucosun Sign ®ibilokhu ihlale ivule amehlo kuyo yonke indlela, kusukela ekwamukelweni kwezinto zokusetshenziswa kuze kube semikhiqizweni yokugcina, konke okugcwaliseka ngohlelo lokulawula ikhwalithi - olwakhiwe ngokuphelele ngabahloli abangochwepheshe kanye nezinto zokusebenza zaselabhorethri ezisezingeni eliphakeme, eziqinisekisa yonke imikhiqizo ngokuhambisana namazinga omhlaba.
Uphawu lwe-Alucosun ®Ithimba lizimisele ukuxhasa amakhasimende ethu ngokunikeza ngesikhathi ukulethwa kwemikhiqizo enokwethenjelwa nezinsizakalo ezinenani elikhethekile. Zonke lezi zinto zingasiza ekutholeni inzuzo yokuncintisana emakethe yakho. Sihlose ukugcina umbono wethu nenhloso yethu ngokufuna njalo ukwenza ngcono nentuthuko ngemfundo eqhubekayo nokufunda.
Sikumema ukuthi ubeke imikhiqizo yethu ukuze ihlolwe, uzothola okungaphezu kwalokho obukulindele!
Hhayi ukufaneleka kuphela kodwa futhi nesimo sengqondo sokunquma ubukhulu bethu.
Langaphambilini Aluminium camera ikhoyili
Olandelayo: I-Alucosun FR A2
4mm Aluminium Iphaneli Ehlanganisiwe
Amaphaneli Ahlanganiswayo e-Alucobond Aluminium
Amaphaneli Wokuhlanganiswa Kwe-Aluminium
I-Pvdf Aluminium Composite Panel